Yekutanga Guides kune SQL Jekiseni uye Muchinjikwa-Saiti Kukanda | Martech Zone
Chitatu, Ndira 3, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Ini handisi pachinzvimbo chandinofanira kunetseka zvakanyanya nezve kuchengetedzeka, asi ini ndinowanzo kunzwa nezve kusagadzikana kwatinenge tichizvidzivirira kubva kwiri. Ini ndinongobvunza imwe yakangwara system dhizaini uye iye oti, "Hongu, takafukidzwa.", Uyezve kuchengetedzwa odhita inodzoka yakachena.
Nekudaro, kune maviri ekuchengetedza 'hacks' kana kushomeka kwaunogona kuverenga nezve zvakawanda pamambure mazuva ano, SQL Jekiseni uye Cross-Saiti Kukanda. Ini ndanga ndichiziva zvese zviri zviviri uye ndaverenga akati wandei 'techy' bulletins pavari, asi ndisiri mugadziri wechokwadi, ini ndaiwanzo mirira zvigadziriso zvekuchengetedza kana kungoita chokwadi chekuti vanhu chaivo vaiziva uye ini ndaizoenderera mberi.
Idzi njodzi mbiri zvinhu izvo munhu wese zvaanofanira kuziva nezvazvo, kunyangwe iye mushambadzi. Kungotumira iri nyore webhu-fomu pawebhusaiti yako kunogona kunyatso kuvhura system yako kune zvimwe zvinhu zvakashata.
Brandon Wood waita basa rakakura rekunyora maGwara ekutanga kune ese misoro iyo kunyange iwe kana isu yatinogona kunzwisisa
Muchinjikwa -Siti Kukanda
Kutyora muA Alexa's Epamusoro 100,000 Sites
Jan 3, 2007 pa 11: 40 AM
Wow, ndatenda iyo posvo Doug. Ndiri kunzwa kukudzwa… 🙂
Dambudziko raunorondedzera rekusanyatso kuziva maitiro emhando idzi dzekushushikana ndiro dambudziko hombe randinoona. Kana ini ndikaratidza programmer iyo isingazive chinhu nezve chengetedzo chidimbu chekodhi uye ndokuvabvunza kana iri yakachengeteka, hongu ivo vachataura kuti yakachengeteka - ivo havazive zvavari kutsvaga!
Iyo chaiyo kiyi pano kudzidzisa vagadziri vedu pane izvo zvekutarisa, uye nemaitirwo acho. Icho chaive icho chinangwa kumashure kwezvinyorwa zvangu zviviri.
Ndira 3, 2007 na2: 37 PM
Inogona kunge isiri nzvimbo chaiyo asi yakauya kuzozivisa chinhu chakakomba.
PS: Ndinoda kuzivisa nezve njodzi hombe mumashoko ekunyora ayo andakakwanisa kuwana. Kubheka kwaro mune izwi reizwi rine njodzi ye7 / 10 Ini handisi kushambadza asi tarisa pane yangu positi html-jekiseni-uye-kuve Ndapota zivisa nezve izvi kune vamwe mabloggi.Ndanga ndine hurukuro naMat (WordPress) paemail nezvazvo.
Ndira 6, 2007 na8: 43 PM
Ndatenda nekundizivisa nezve izvi - ini ndakasimudzira kuWordPress 2.0.6. Ini ndinotenda yakagadzirisa nyaya iyi.
Ndira 6, 2007 na8: 47 PM
Hongu zvapera izvozvi.Chikuru kuti inotevera vhezheni yakabuda nekukurumidza
PS: tingave nekuchinjana chinongedzo? ndiudze kana uchida zano
Jun 25, 2008 pa 3: 33 PM
WordPress MySQL isikana scanner?
Pane here chishandiso chiripo chinogona kuongorora an
isinga tsanangurwe WordPress tafura yeMySQL inotumirwa kubva ku phpMyAdmin?
Tine WordPress MYSQL dhatabhesi inoita kunge iine
ndakanga ndine SQL jekiseni.